ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने डरले सुन्दरी घरभित्रै कैद ! - Naya Pusta
एजेन्सी । सबैले खोज्ने राम्रो हो। अझ राम्री युवतीको चर्चा सबैभन्दा बढी हुन्छ। कतिपयलाई आफ्नै सुन्दरताले पनि दुःख दिन्छ। अर्थात् आफ्नै सुन्दरता अभिषाप बन्छ। धेरैलाई सुन्दा यो अचम्म लाग्न सक्छ। तर रुसकी एक युवतीलाई भने यस्तै भएको छ। २६ वर्षीया एन्जेलिका केनोभा धेरै सुन्दर भएकै कारण घर भित्रै कैद भएकी छिन्।
यस्ता छन् सेक्स पावर बढाउने गज्जबका उपायहरु !
जानिराखौँ बिहान सबेरै उठ्दा स्वास्थ्यमा के कस्ता फाइदा हुन्छन्
काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज